फ्री अनलाइन सेवा। उत्खनन, earthworks
भूमि उत्खनन को मात्रा लागि को गणना
चित्र मात्रा 1: 1 1.5234567 8910
Earthworks को मात्रा गणना
B - उत्खनन को गहिराई
Y - इनारको लम्बाइ
X - खाडलमा को चौडाई
निर्माण earthworks - पूल या पोखरीमा, एक स्वायत्त देश घर ढल, निकासी प्रणाली वा पानी घरेलु लागि एक खाई पौडी जग खोरमा खनेर छ।
उत्खनन आयोजना मा उत्खनाई माटो को मात्रा आकलन गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
उत्खनन को लागत खाइयों को उत्खनन र वा माटो को हटान हुन्छन्। यो बगैंचामा वा बगैंचामा भविष्यको लागि पृथ्वीको Topsoil पत्र को आन्दोलन योजना आवश्यक छ। माटो को बाँझोपन साइट, प्रतिक्रिया ओछ्यान जग समतल लागि प्रयोग वा बन्द-साइट लिएका छन्। माटो को हटान को लागि स्थान अग्रिम मा कटिबद्ध छ।
साथै 1 घन मीटर को खन्न लागि शुल्क अक्सर काम को गहिराई संग बढ्छ भनी याद गर्नुहोस्। 1 मिटर र गहिरो 1 मिटर गहिराइमा सतह देखि मूल्य भएकोले र दुई पटक पनि भिन्न हुन सक्छन्। माटो रफ्तार अक्सर खर्चको एक अलग आइटम छ। अप्रत्याशित खर्च लाग्न छैन क्रम मा, सबै ठेकेदार पहिल्यै stipulate।
जग घनघोर जब formwork लागि उत्खनन को सञ्चिति विचार गर्नुहोस्।
हात वा बेकहो?
यी दृष्टिकोण प्रत्येक उनको भला र विपक्ष छ।
काम म्यानुअल खोरमा अधिक सही गरे सकिन्छ जब।
कम लागत श्रम, र हात उत्खनन गरेर उत्पादन अन्तिम लागत को सानो मात्रा संग एक उत्खनन र अन्य मेसिनरी renting भन्दा कम हुन सक्छ। सजिलो नियन्त्रण खाडलमा को आकार र ज्यामिति लागू गर्न।
यो backhoe को माटो र गति मात्रामा छ तर, यदि अक्सर जितेकी। कुनै पनि मामला मा, तपाईं निर्णय।
Earthworks को प्रक्रिया।
पहिलो तपाईं खाडलमा वा खाई ठाउँ चिनो गर्न आवश्यक छ। यस गर्न, जमीन खूंटे र एक पातलो डोरी मा काम को ठाँउ संकेत गर्छ। उनि म्याच पर्छ - ज्यामिति खाडलमा को भविष्य को दुई विकर्णों नापइन्छ नियन्त्रण गर्न।
तर, यो एक अव्यवसायिक तरिका हो र खाइयहरुमा वा अपेक्षाकृत तला भूमि अंकन लागि उपयुक्त छ।
निम्न प्रविधिहरू थप सही डिजाइन earthworks लागि।
प्रस्तावित उत्खनन देखि केहि दूरी मा दुई समूहमा काठको स्तम्भ digged (castoffs). तिनीहरूले थापे पुल जो, तेर्सो बोर्ड दृढ। बोर्ड प्रत्येक अन्य संग नै स्तर तय गर्न प्रयास गर्नुहोस्।
थापे हिल, सही अंकन हासिल। भविष्यमा प्रयोग र सटीक पट्टी जग formwork लागि यी डाली-ओफ।
धेरै काम स्तर, theodolite, लेजर टेप उपाय वा लेजर स्तर सुविधा।
एक कमजोर क्षेत्र वा उत्खनन को निकै गहिराई संग उत्खनन को सुरक्षा गर्न विशेष ध्यान। यस मामला मा, खाडलमा को पर्खाल कडाई ठाडो छैन, तर एक पूर्वाग्रह संग - माटो को बहाउन रोक्न।
पक्षहरु र खाडलमा स्तर नियन्त्रण र लामो पर्याप्त रेल तल।
90 डिग्री सही कोण लागि एक स्वागत छ। पक्ष संग त्रिभुज 3:4:5 मीटर (वा यी संख्या को धेरै गुना हो कि पक्षहरु संग) एक 90 डिग्री कोण छ। अन्य मा,3मीटर को कोण को एक तर्फ निर्धारित -4र अंक बीच दूरी ठ्याक्कै5मिटर हुनुपर्छ।